Wasaaradda Maaliyadda Puntland oo amray kobcinta daqliga gudaha Puntland - Radio Risaala: Somali News Online
Wafdi ka socda DFS oo shir uga qeyb galay Turkiga
RW Rooble oo magacaabay Guddiyada doorashada( Akhriso Magacyada)
DHAGEYSO:- Warka Habeen ee Radio Risaala19-06-2021
Wasiirada Arrimaha dibedda Turkiga, Afgaanistan iyo Iiraan oo kulan yeelanaya
Soomaaliya & Kenya oo ka wada hadlay soo celinta & adkeynta xiriirkooda
Talyaaniga oo noqday xulkii ugu horreeyay ee u soo baxa wareegga 16-ka ee Euro
Kala iibsiga Ciyaartoyda Kooxaha Yurub oo bilaawday
Ciyaaryahan Christian Eriksen oo xaalad halis ah galay
Chelsea oo ku guuleysatay Horyaalka Kooxaha Yurub
Afar koox oo u gudbay semifinal-ka Horyaalka Basketball Africa League
Sudan oo Khadka Internetka loo jaray Qishka Ardayda
Turkiga oo ku guuleystay tijaabada gantaal burburiya maraakiibta
Booliska Kenya oo toogtay laba Ruux oo dhac u geystay Haweeney Soomaali ah
Farmaajo oo farriin u diray Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay
Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Soomaaliya Maxamed C/risaaq Maxamuud, ayaa ka qeyb galay, maalintii, kulan ku saabsan sii xoojinta iskaashiga dhaqaale ee...
DHAGEYSO: Warka Subax 19-6-2021
DHAGEYSO: Warka Duhur 18-6-2021
DHAGEYSO: Warka Subax 17-6-2021
Home Wararka Wasaaradda Maaliyadda Puntland oo amray kobcinta daqliga gudaha Puntland
Wasaaradda Maaliyadda maamulka Puntland ayaa maanta qabatay shir looga hadlaayay kobcinta cashuurta iyo dakhliga Puntland.
Shirkan oo lagu qabtay habka muuqaal baahiyaha ee ZOOM-ka ayaa waxa soo agaasimay Kuxigeenka Agaasimaha Guud ee Dakhliga iyadoo ay ka soo qayb galeen Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Puntland, Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Maaliyadda,
Agaasimayaasha Dakhliga ee Wasaaradda Maaliyadda iyo Maamulayaasha dakhliga ee dhammaan goboladda.
Ujeedada shirka ayaa ahaa sidii loo xoojin lahaa nidaamka cashuur uruurinta iyo hirgalinta qorshaha cashuuraha ee Dakhliga sanadka 2021.
Kuxigeenka Agaasimaha Guud ee Dakhliga ayaa ka warbixiyay xaaladda dakhliga ee Puntland iyo qorshaha dakhliga si kor loogu qaado dakhliga Guud ee Dowladda.
Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Maaliyadda Puntland Mudane Cabdi Ibrahim Warsame ayaa xusay tallooyin mira dhal ah oo kor loogu qaadayo dakhliga isagoo sheegay tiro qoddobo ah oo wax wayn ka badalaya dakhliga.
Wasiirka Wasaaradda Maaliyada Puntland Mudane Xasan Shire Cabdi ayaa shirka ka xusay in sanadka 2021 loo aqoon saday in dakhliga laga shaqeeyo iyadoo awoodda Wasaaradda xooga saari doonto sidii loo hubin lahaa in la helo Miisaaniyadda dakhliga laga sugayo.
Mudane Xasan Shire Cabdi ayaa faray madaxda dakhliga in sanadkaan uu noqdo sanad ay Wasaaraddu soo xarayso dhakhligii ugu badnaa abid soo xarooda.
Previous articleSheekh Shariif oo ku baaqay in fursad la siiyo Rooble kana hadlay Shirka 20-ka Bisha
Next articleTallaalka Covid-19 oo lagu baaqay in isbadel lagu sameeyo
DHAGEYSO:- Warka Duhur ee Radio Risaala19-06-2021